ကျွန်မငယ်စဉ် အသက်၃ဝကျော်မှာ ကျင့်စဉ်ပေါင်းများစွာကို အားထုတ်ခဲ့ ပါတယ်။ သည်အထဲ ကမှ နည်းလေး တစ်ခုကို ၂၀၂၁အတွက်နှစ်ဦး လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးဖို့ ရည်ရွယ် ပါတယ်။ အစ ကတော့ ၃ဝရက်လောက် မှရေးရင် မှီမယ်ပေါ့။ ဇန်နဝါရီ ၁ရက် စစိပ်ကြရင် အမှတ် တရ ပဲလို့ တွေးတာ ပါ။ ညီမလေး ဝိုင်းကို ပြောပြတော့ သူလည်း စိပ်ချင်တယ်။ သူ့မွေးနေ့လည်း ရှိတော့ မွေးနေ့ အမှတ် တရ စိပ်မှာမို့ မွေးနေ့ မတိုင်ခင် ပေးပါလား မလေးရယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဟုတ် ပါပြီ။ ဒါကြောင့် အခုပဲ ပေးဖို့ တွေးလိုက် တာပေါ့။ ကောင်း ပါပြီ။ အဲ့သည် ကျင့်စဉ်လေး အ ကြောင်းကြိုပြီး နည်းနည်း ပြောပြ ပါမယ်။ သည်ကျင့်စဉ်ကို ရစဉ်က နက္ခတ္တရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်း က တွေ့ရတာပါ။ နှစ်သက်တာ မို့ ကျွန်မ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ စိပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက မစွဲမြဲပါဘူး ပြောခဲ့သလို နောက်ပိုင်း ပျက်သွားမေ့သွား ပါတယ်။ သည်လိုနဲ့ နည်းကို မှတ်မိ ပါသော်လည်း နှစ်ရှည်ကြာ စိပ်ရသော အနည်းဆုံး ၂နှစ်ခွဲ ၃နှစ် စိပ်ရတာမို့ စာရွက်လည်း မရှိတော့ပါဘူး။ နောက် တစ်ခါကျွန်မ သည်နည်းလေးကို ကြိုက်နှစ် သက်စွာ ကိုယ့်ဖာသာ ဓါတ် ကြီးလေးပါးအပါတ်ရည်တွေနဲ့တွဲပြီးပြန်စိပ်ပြန်ရော။တစ်ဆင့်အောင်တော့ပျက်ပြန်ရော။ ဪ။ ခိုင်ဇင်သက်တို့က အတော်စွဲမြဲတာ။
မေမေက ဒါကြောင့် ရေတွင်း မတူး တတ်ဘူး ပြောတာ ပါ။ အမှန်ဆို အဲ့သည် ကျင့်စဉ် လေးက တစ်နေ့ တပါတ် ၁ပါတ်ထဲ စ်ပ်ရင် မပျက် ပါဘူး။ ဒါဖြင့် အပါတ်‌ရေ ဘယ်လောက် စိပ်ရ မလဲ။ ဓါတ်ကြီး၄ပါးနဲ့တွဲမှာပါ။ အသံတို့စကားလုံး တစ်လုံးမျှမှာပင် တန်ခိုးတွေရှိနေလေတော့ တစ်ချို ဥုံ တစ်လုံးတည်း ရွတ်ဖတ်ကြတာ တွေကြားဘူးမှာပါ။စကားလုံးဂါထာ မန္တာန် တစ်ပုဒ်သည်ပင် အလုံးရည်၊အပုဒ်ရည်၃၆ဝဝဝဝဝဝ။ သုံးသန်းခြောက်သိန်း ရွတ်မယ်ဆို ထူးခြာတဲ့ သိဒ္ဓိတွေ ရ မယ်ဆိုတာကို ကျွန်မက သိမ်းထားဘူး ပါတယ်။ ကျွန်မငယ်ထဲက ဖတ်သမျှစာတွေနှစ်သက်ရင် စာအုပ်နဲ့ ရေးကူးတယ်။ အားထုတ်ကြည့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မက ကျင့်စဉ်လေးကို သည် ဓါတ်ကြီး လေးပါး အရည်အတွက်နဲ့ ပေါင်းထား လိုက်တာပါ။ မူရင်းစာရေးသူ တွေက နှစ်ပေါင်း ကြာတော့ ကျေးဇူး တင်ပါသော်လည်း နာမည် မမှတ်မိတော့ပါ။
ဓါတ်ကြီးလေးပါး (ပထဝီ၊အာပေါ၊ဝါယော၊တေဇော) အရည် အတွက်အတိုင်း ၁၀၈လုံးပုတီး နဲ့ စိပ်ရ မှာပါ။ ပထဝီ အတွက်က မြေထု ၂၄ဝဝဝဝကို ရည်စူး ပြီး အပါတ်‌ ရည်၂၄ဝဝ။ အာပေါ အ တွက်က ရေထု ၄၈ဝဝဝဝကို ရည်စူး ပြီး အပါတ်ရ ည် ၄၈၀ဝ။ ဝါယော အတွက်က လေထု ၉၆ဝဝဝဝကို ရည်စူးပြီး အပါတ်ရည် ၉၆ဝဝ။ တေဇောအတွက်က မီးထု ‌၁၉၂ဝဝဝဝကို ရည်စူး ပြီး အပါတ်ရည် ၁၉၂၀ဝ။ စုစုပေါင်း။၃၆ဝဝဝ။အပါတ်ရည်ပေါင်း၃၆ဝဝဝပြည့်မှသာ သည်ပုတီး စိပ်ပြီး ပါပြီ။ဒါဆို ဘာကို စိပ်ကြမလဲ။ (၁)အရဟံ (၂)သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ (၃)ဝိဇ္ဇာ စရဏ သမ္ပန္နော (၄)သုဂတော (၅)လောကဝိဓူ (၆)အနုတ္တရောပုရိသ ဓမ္မသာရထိ (၇)သတ္တာဒေဝမနုဿာနံ (၈)ဗုဒ္ဓေါ (၉)ဘဂဝါ (၁ဝ). အရဟံ (၁၁). အရ ဟံ (၁၂). အ ရဟံဂုဏ်တော်၉ပါးကို အရဟံ ၃ပါး နဲ့ ပေါင်းလိုက် ပါတယ်။ဒါကြောင့် ၁၂ပါး။တစ်ပါး တစ်လုံးချပြီး စိပ်တော့ ၁၂လုံးရမယ်။
ပုတီးတပါတ်ဆို ၉ခေါက်ရပါပြီ။ ၁၀၈လုံး ပုတီးနှင့်သာ စိပ်ပါ။ ကောင်တာတို့ သွားလာရင်း ရွတ် တာ ကုသိုလ် ရပါသော်လည်း အဓိဌာန် ပုတီး အရည်အတွက် ထဲပါဖို့ ၁၀၈လုံး ပုတီး ကိုသာ သုံး ၍ စိပ်ရပါမယ်။ အလုပ်၊ဆိုင် စသည်လုပ်ရလျှင်ပုတီးကို အိတ်ထဲထည့်ယူသွားပြီး အချိန်ရ လျှင် အလုပ်စားပွဲ၊ဆိုင်စားပွဲထဲ ပုတီးထည့်စိတ်ပါ။၁၀၈လုံးပုတီးနှင့်စိပ်ထားမှသာ အရည်အတွက် ထဲ ထည့်ပါ။ဒါကြောင့်မှတ်ထားဖို့ စာအုပ် မှတ်တမ်းလေး လိုပါမယ်။တစ်ရက်ကို။ ၁ပါတ်ပဲ စိပ်ရင် အဓိဌာန် မပျက်ပါဘူး။ဒါကြောင့် အလုပ်များတဲ့ အခါ။နေမကောင်းတဲ့အခါ ၁ပါတ်ကို မဖြစ်မနေ စိပ်ယုံနဲ့ မပျက်ပါ ဘူး။၅ပါးသီလကတော့ ကြိုးစား ထိမ်းရမှာ ပေါ့နော်။တစ်ရက်ကို ပုတီး ပါတ် ၂၀စိပ်ရင် ပထမဆင့်က ၄လစိပ်ရပါမယ်။ဒုတိယဆင့်က ၈လစိပ်ရပါမယ်။ဒါကြောင့်တစ်ရက် ၂ဝပဲစိပ်ရင် ၂ဝ၂၁ကုန်မှ ၂ဆင့်ပဲပြီးပါမယ်။ အပါတ်၂ဝစိပ်ရ မယ်မဆိုလိုပါဘူး။ မှန်းတွက်ပြတာ ပါ။ကိုယ့်မှာ တခြားရွတ်ဖတ်စရာတွေပြီးလို့ စိပ်နိုင်ရင် ပုတီးပါတ်၁ဝဝစိပ်စိပ်၂ဝဝစိပ်စိပ် ကိုယ့် တတ်နိုင် သမျှစိပ်ပါ။နေမကောင်းဘူးလား။၁ပါတ်တော့ရအောင်စိပ်။မပျက်ဘူးပေါ့။ ကိုယ့်ဝီရိ ယပေါ်မူတည်ပြီး မြန်မြန်ပြီးမယ်။ နှေးနှေးပြီးမယ်။ အနှေးအမြန် ပဓါနမဟုတ်။ စိပ်နိုင်ဖို့သာလို ပါတယ်။၁ဝဝစိပ်ရင် ၂ဝစိပ်သူထက်၅ဆစောပြီးမယ်ပေါ့။ကျွန်မကော စိပ်မှာလား။ ကျွန်မလက် မကောင်းလို့ ပုတီး မစိပ်တာ ကြာပါပြီ။ တရား မှတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထူးဆန်းတာလေး ရေး ပြပါမယ်။
ကျွန်မက သည်ကျင့်စဉ်လေးကို ကျွန်မရဲ့ မမ၊ညီမ၊တူ၊တူမလေးတွေ အားလုံး စိပ်ချင်သူ စိပ်ရ အောင် ကုသိုလ်ပြုတာပါ။ကျွန်မ မစိပ်ဘူးလို့ ရည်ရွယ်တာပါ။ တစ်နေ့က ကျွန်မကိုချစ်ခင်သော ငယ်ငယ်ဆိုတဲ့ ညီမလေးက ချစ်ခင် လေးစား ကုသိုလ်ယူချင် လို့ပါဆို ၁၅၀၀ဝလှူပါရစေပြောပါ တယ်။ ကျွန်မက မယူပါရစေနဲ့ လူကြီးနဲ့ လူငယ်ကြား ပေးချင်းပေး အစ်မက ပေးရမှာ ဆိုတော့ မဟုတ် ပါဘူး။ညီမက မပြည့်စုံလို့လား။မမ အနွေးထည် ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကြိုက် ဝယ်ဝတ်ပေးပါဆို ငြင်းမရ။ ကျွန်မကို ခုနှစ်ဆောင်းမှာ အစ်မမယုကလည်း သူ့ကို မြေဇင်း တရားတွေ ထိုင်ခိုင်း။ နိ မိတ်တွေရ။ဘုရားတွေ ဖူးရလို့ တရားကျေးဇူးပါဆို ခြုံထည် အနွေးထည် ပေးတာတောင် ဘယ်မှ မသွားရတာမို့မဝတ်ရသေး။ မမပြည့်စုံတာသိပါတယ်။ညီမလေးက မပြည့်စုံလို့လားဟင်ဆိုတော့ ဘာလုပ်ပေးရမှန်းမသိ။နောက်တော့ ရွှေလသာ/မျိူးကို သတိရသွားပါတယ်။ နှစ်ယောက်လုံး ကု သိုလ်ရအောင် မျိူးဆီကပုတီးကို ငယ်ငယ့်ပိုက်ဆံ အတိုင်းပေးပါဆိုပြောရပါတယ်။မျိူးကတစ်ခါ သူရောင်းတဲ့အထဲက မွေးပုလဲပုတီးကိုမှ ငယ်ငယ့်ပိုက်ဆံ အပြင်နောက်ထပ် အကုန်သူလှူမယ်ဆို ပို့ပေးမယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ သည်တူမလေး နှစ်ယောက် ကုသိုလ်ရအောင် အခု အဓိဌာန်ကို ပြန်ဝင်ဖို့ ဆုံး ဖြတ်ပါတယ်။
ကျွန်မမှာ တရားမှတ်ချိန်တွေလည်း ရှိတော့ အများကြီး မစိပ်နိုင်လေတော့ တစ်နေ့၂ဝလောက် များရမလား တွက်ကြည့် တာပေါ့။ တစ်ပါတ်က ခဏလေးမြန် ပါတယ် လေ။ နေမကောင်း ရင် မပျက် အောင်က တစ်ပါတ် ထဲ။ကျွန်မ ချစ်တဲ့ အစ်မ၊ ညီမ၊ တူ၊တူမလေး တွေ ကတော့ များများ စိပ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဒါလေး စိပ်ရဦးမယ်လို့ ရသမျှ စိပ်သွားရင် အရည် အ တွက်ထက် ဂုဏ်တော်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေရလာကြမှာပါ။ တစ်ဆင့်မျှသည်ပင် အတော်သိသာ လာပါတယ်။ ဂုဏ်တော်၉ပါးအရဟံ၃ပါး။အခုပုတီးစိပ်ပေးသူက သူလည်း သည်ကျင့်စဉ်ကို ၂နှစ် ခွဲလောက်စိပ်ပြီး အစစပြည့်စုံလာတာလေး ပြောပြထားတာပါ။ ဂုဏ်တော်တွေပဲလေ။ ကုသိုလ် ကအများကြီးပါ။ ကျွန်မကတော့ ၃၁ရက်ကြာသပတေးမှာ စစိပ်ပါမယ်။ကျွန်မက ပဌာန်း၅ကျမ်း တွဲကိုပင် ၂နှစ်ခွဲလောက်ရွတ်သူပါ။ ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာကြာ ဂုဏ်တော်တွေ ထုံမွှမ်းရမှာရယ်။
မရည်ရွယ်ပါပဲ တူမလေး နှစ်ယောက်ထပ်တူ ကုသိုလ်ရမှာ ဆိုတော့ ဖြည်းဖြည်း မှန်မှန်ပဲ စိပ်ပါ မယ် ။တကယ်လို့ ကိုယ့်မွေးနေ့ စိပ်ချင်ရင်တော့ အဆင်ပြေ မယ့်ရက်စစိပ်ပါ။ ကြာသပတေးဆို ကျွန်မလို ၃၁ရက် မှ စိပ်ပေါ့။ သောကြာဆို ဇန်နဝါရီ ၁ရက် စပေါ့။ ဘယ်သူ ဖြစ်ဖြစ် ၁ရက်စိပ် လည်း အမှတ်တရ ဖြစ်ပါ တယ်။‌ မွေးနေ့ စချင်လည်း ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် နဲ့ နှစ်ကုန်၊နှစ်ဆန်း အဆင်ပြေသ လိုစိပ်ပါ။သည်လောက်ဆို ကျင့်စဉ်လေးရှင်းမှာပါ။ မရှင်းသေးရင်မေးပါ။ မေတ္တာ သုတ်လေးကတော့ အရှေ့ဖက် ၁ခေါက်လောက် ရွတ်ရင်ပို ကောင်းတာပေါ့။ကျွန်မရဲ့ အစ်မ၊ညီမ၊ တူ၊တူမလေးတွေက ဝီရိယ ကောင်းကြ ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ နှေးနှေးမှန်မှန် သွားပါမယ်။ ဂုဏ်တွေထုံမွှမ်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လာတာကိုကပင်နည်းတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်လေတော့။ ၂ဝ၂၁။၂ဝ၂၂ စသည်။ဂုဏ်တော်တွေနှင့်ကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင်လား။